बेलायतले सबै जनताका लागि खोप प्रयोगको अनुमोदन – Milappost
सोमबार, १८ साउन, २०७८
बेलायतले सबै जनताका लागि खोप प्रयोगको अनुमोदन
मिलाप पोस्टबुधबार, १७ मङि्सर, २०७७
काठमाडौं – बेलायतले फाइजर र बायोटेकले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरससविरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) प्रयोगका लागि अनुमोदन गरेको छ । बेलायतले सबै जनताका लागि खोप प्रयोगको अनुमोदन गरेको हो ।
योसँगै बेलायत सबैका लागि खोप प्रयोगको अनुमोदन गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ ।बीबीसीले जनाएअनुसार यो खोप ९५ प्रतिशतसम्म सुरक्षित छ । र, यो खोप आगामी हप्तादेखि नै उच्च प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई लगाउन थालिनेछ ।
बेलायतले यो खोपको चार करोड डोज मगाइसकेको छ । कम्पनीले जोखिममा परेका संक्रमितका लागि शुरुमा १ करोड खोप उपलब्ध गराउने र केही दिनमा थप डोज दिनेछ ।
फाइजर र वायोटेकले विकास गरेको खोपले विभिन्न चरण पार गरिसकेका छन् । खोप विकास भए पनि विश्वभर पुग्न समय लाग्ने भएकाले विशेषज्ञहरूले कोरोना भाइरसबाट जोगिन उचित ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यो खोपको प्रयोगसँगै मानिसहरू रोगसँग लड्न सक्ने दाबी गरिएको छ । यो खोपलाई माइनस ७० डिग्री तापक्रममा भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । खोप राख्न तयार पारिएका विशेष बाकसहरूमा यसलाई ५ दिनसम्म राख्न सकिन्छ । अति चिसो चापक्रममा राख्नुपर्ने भएकाले विकाशोन्मुख राष्ट्रमा यसको भण्डारणमा समस्या पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
शुरुमा यो खोप बेलायतमा फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका व्यक्ति, उच्च हेरचाह गर्नुपर्ने कर्मचारी, सामाजिक हेरचाहकर्मी तथा ८० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई दिइनेछ ।
यो खोप सन् २०२१ को सुरुवातसम्म सबैलाई पुर्‍याउन लक्ष्य लिइएको छ । यो दुई डोजमा इन्जेक्सनको रूपमा दिइन्छ । २१ दिनको फरकमा दोस्रो खुराक दिइन्छ ।
Posted in यौन/स्वास्थ्य
तपाईसँग समसामयिक सन्दर्भमा कुनै लेख\_रचना, समाचार, प्रेस नोटहरु, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा हामीलाई पठाउनुहोला । हामी सम्भव भएसम्म धन्यवादसहित प्रकाशन गर्नेछौं । -सम्पादक
गर्भावस्थामा गराउनैपर्ने केहि परिक्षणहरु यसप्रकार छन्
खानामा चर्को नून खाने बानीले मृगौला फेल हुने अत्याधिक सम्भावना
युरिक एसिड भएको बेला के के नखाने ?
जुका र चुर्ना हटाउने घरेलुविधि हेर्नुस्
Milap Media House Pvt.Ltd.
Chief :-Amosh F. lama(indra)
Mobile N. 9863597473
Editor :- Chatur Man Tamang
Reporter :- Samip Adhakari (Gorkha), Suzan Tamang(Kathamandu), Manoj Bote(Malaysia), Marshal Lama (Dhading), Anjan Gurung (Pokhara)
Address:- Palungtar9,Birdi Gorkha Nepal
Milap Media House Pvt.Ltd
Milap media house was established on Nov, 2019. We have primarily started this media by providing content like Interviews,Talk Show, Reading News, Documentary, Short public awareness videos, Funny video, Technology tips, Live Performance Program etc.
सुचना बिभाग दर्ता नं.१८००/०७६-७७
© मिलाप मिडिया हाउस प्रा.लि - २०२० सर्बाधिकार सुरक्षित
Site by: Subba pdm